Rag si yaab leh u dhici jiray haweenka oo la xumay | KEYDMEDIA ONLINE
Rag si yaab leh u dhici jiray haweenka oo la xumay
Labo nin oo si la yaab leh u dhici jiray haweenka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa lagu xukumay kadib markii lagu helay danbiga eedaha loo hor geeyay Maxakamdda Ciidamada.
MUQDISHO, Soomaaliya - Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida, ayaa xukuntay labo nin oo lagu helay in farsamooyin ay filimada Hindiga ka soo minguuriyeen ku dhici jireen haweenka ku dhaqan Caasimada dalka ee Muqdisho.
Cabdifitaax Cali Cumar, oo hore u qirtay inuu dhac u geysatay 30 gabdhood, hayeeshee lagu eedeeyay dhac ka badan intaas, ayaa lahaa figradda, wuxuuna taleefannada iyo agabka kale ee uu gabdhaaha ka soo dhaco u keeni jiray Nuur Cali Xasan oo ah farsamayaqaan sii iibin jiray agabyada la soo dhacay.
Cabdifitaax Cali, oo sidoo kale lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay Al-Shabaab ayaa wadan jiray gaari nooca raaxada ah iyo bastoolad uu dadka ku dhaco, waxaana gacanta ku soo dhigeen Ciidanka Booliska Dowladda Federaalka, isagoo gacanta kula jira falal amni darro.
Sida uu ku dhawaaqay Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida, Xasan Cali Nuur Shuute, 10-sanno oo xabsi ciidan ah ayaa lagu xukumay Cabdifitaax Cali Cumar, halka Nuur Cali Xasan isna lagu riday xukunka 2-sanno oo xabsi ah.
Marka laga yimaado farsamooyinka uu dadka ku dhici jiray Cabdifitaax, waxaa dadka layaab ku noqotay inuu hore u soo noqday imaam Masaajid ku yaalla magaalada Gaarisa ee dalka Kenya, ka hor inta uusan ka soo baxsan sirdoonka Kenya oo baacsanayay rag lagu tuhunsanaa inuu ku lug lahaayeen weerarkii Westgate Shopping Mall.
Shacabka Muqdisho ayaa la dhibaatoonaya dhac joogto ah oo ay ku hayaan burcad hubeysan oo koox koox isugu xiran, kuwaas oo intooda badan marka ay dhaca gaystaan ku baxsada mootooyin.